Jery ​​todika mety ho nomanin'ny Unity ho antsika ao amin'ny Ubuntu 12.10 | Avy amin'ny Linux
Jery ​​todika mety ho fanomanana antsika amin'ny Ubuntu 12.10
Perseus | | Fitsinjarana, GNU / Linux
Rehefa namaky ny sakafoko aho omaly, dia nahita an'ity horonantsary ity izay mampiseho amintsika izay mety ho fakan'i Canonical ho antsika Unity amin'ny Ubuntu 12.10.
Tena mametraka ny hena rehetra ao anaty lovia miaraka amin'ny Unity ry zalahy ireto. Izaho manokana dia tena tiako ilay hevitra. Inona ny hevitrao ;)?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Jery ​​todika mety ho fanomanana antsika amin'ny Ubuntu 12.10
Salama Heveriko fa tena mahaliana ireo hevitra navoakan'ny horonantsary ary marina fa tian'ireo bandy Ubuntu mikasa ny amin'ny ho avy (kinova iray na roa hita momba ilay asany) fa ny aseho eto dia fanesoesoana, kely ny tompon'andraikitra.
Tsy maintsy miandry ny mpandraharaha isika vao tena hiasa ho an'io kinova io ary haneho ny sasany amin'ny fivoarany.
Toy izao no tokony ho izy hatramin'ny voalohany! Wow, tsara tarehy toa izany, saingy raha ny fahitako azy dia foto-kevitry ny mpampiasa Ubuntu izy fa tsy olona avy any Canonical, ka na dia tsy fantatry ny orinasa aza izany dia hijanona ho hevitra ihany izy io.
Eny, araka ny nolazain'i Hokasito, fanesoana tsy ofisialy fotsiny izany. Saingy mety hahomby amin'ny fanabeazana ny Unity sy Gnome-shell ny famerenana amin'ny laoniny ny sasany amin'ireo hevitra ireo, satria azo antoka fa hanatsara ny doka tsirairay avy izy ireo.
Raha toa izao ny firaisankina, dia hiverina amin'ny ubuntu mahazatra aho, toa voadio sy miasa tokoa izy io.
Queeee mahatsiravina… .. hodgepodge mifantoka amin'ny ampahatelon'ny efijery, feno zavatra isan-karazany, isaky ny tsindry bebe kokoa hatrany, isaky ny mila fanampiny bebe kokoa ho an'ireo fampiharana samihafa hampidirina, finday avo lenta amin'ny efijery solosaina… . puuuffff.
Gnome… .. vonjeo izahay fa miantso mafy.
Raha jerenao akaiky dia ho tsapanao fa manamarina ny isan'ny fahafaha-manao ny fikambanana. Tsy mahazo aina amin'ny menus style all-in-one (kde na karazana fandresena) aho, saingy toa hitako fa tsy azo idirana ireo menu gnome telo mahazatra miaraka amin'ny fanampim-panafody gnome-do. Rehefa manokatra ny dash-gnome-shell aho dia malahelo ny menio panel gnome (ary toy izany koa rehefa nanandrana ny Unity). Saingy amin'ity tranga ity dia mampiditra ny fahazoana ny menn'ny tontonana gnome amin'io karazana dash io izy, izay toa mety amiko.
Izaho manokana dia tena tiako ilay hevitra. Ahoana ny hevitrao 😉?
Omeko anao ny fahazoana miditra ao an-tsaiko ity fampahalalana ity
Tsara, any ambony rihana ... andao hitady hidy herinaratra ary hanokatra ny lohan'i Courage isika, hijery izay ao anatiny haha ​​... ary nomeny alalana fotsiny izahay 😀
Eny, manana boky torolàlana iray avy amin'ny RAE aho satria tsy misy ny "hidy herinaratra".
Raha niditra ny anao izahay dia ho fantatray fa tianao ny olona iray, reggaeton, maninona ny sipa no mandao anao, sns.
Herim-po 1 Gaara 0
Fanitsiana: "Nahoana" tsy voalaza, fa "maninona".
Misy ny tsy fitoviana amin'ny "maninona?", "Satria" sy "maninona".
-Nahoana ny sipa no mandao anao?
-Mandao ahy izy ireo satria diso ny fitsipi-pitenenana na ny tsipelina nataoko.
-Eny, raha izany no manazava ny anton'ny fanilihana azy ireo dia tokony handray fampianarana ianao.
Eny, ny marina dia tsy misy miraharaha ny tsipelina na ny fomba fiteny
hahahahahaha ireo izay manitsy an'ireny hadalana ireny hahahahahaha
Homeko anao ny zava-misy, ny ankamaroan'ny jeniana teo amin'ny tantara dia nanana tsipelina, fomba fanoratra ary fomba fiteny ratsy, saingy mbola nampiova izao tontolo izao izy ireo
Eny, manelingelina ahy be dia be ny hoe (HOYGAN) diso tsipelina, mampihena ny fahatokisan'ny olona izany.
Tsy miraharaha ny tsipelina sy ny fanoratana aho, miampy kely ihany
Lemurian dia hoy izy:
Mety ho tsara izany satria ny fahalalahana misafidy indrindra fa tsy momba ny safidiny ho antsika.
Valiny tamin'i Lemurian
Eny, raha ny marina, ny hevitra dia natiora, saingy tsy tiako izany.
Lucas Matthias dia hoy izy:
Nanandrana ny Unity 5 tao amin'ny Ubuntu 12.04 beta aho ary tena tiako ny zavatra sasany manampy nefa… ..
…. tsy misy toa an'io.
Valiny tamin'i Lucas Matias
Salama daholo, na lasa adala aho na izaho irery no olona tsy te hahita ny firaisana na dia ny volo aza. Nifindra tany amin'ny Ubuntu 11.10 aho ary ny zavatra voalohany nataoko dia ny fanalana ny Unity, io ihany no zavatra tsy tiako momba an'i Ubuntu. Izaho dia manana Cairo napetraka ary mety amiko izany, haingana kokoa noho ny Unity izy io ary milamina kokoa. Administratera iray amin'ny tamba-jotra aho ary amin'ny asako dia mampiasa Solaris izahay fa ao an-trano kosa mampiasa Ubuntu, teo aloha dia nampiasa Red Hat izay milamina kokoa noho i Ubuntu fa rehefa te hizaha toetra aho, dia efa nandramako nandritra ny fotoana kelikely ny Ubuntu ary ny marina tsy maninona izany fa hoy hatrany aho, dia ny firaisana no sisa. mahafaly
Tsia ... Miala tsiny aho milaza aminao fa ... Tsy te hahita an'io koa HAHAHA !!
Nanandrana ny Unity in-2 na in-3 aho, ary arakaraka ny nampiasako azy no nahatsapako fa tsy misy dikany tanteraka izany, tsy mamokatra izy io fa ny mifanohitra amin'izay ... ¬_¬
Tongasoa eto amin'ilay tranonkala 😀
JOLAY dia hoy izy:
Izaho dia maniry mafy ny hivoahan'ny fizarana ubuntu 12.10 vaovao hanaporofo izay tena mitondra antsika indray ..
Valiny amin'i JULY
Debian 7 dia ho avy miaraka amin'ny Linux Kernel 3.2
Mametraka ny biraoko amin'ny Openbox